8 no maty, 22 naratra: Nanafika olona maro tany Longyan, Sina ny aotobisy voarohirohy
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » 8 no maty, 22 naratra: Nanafika olona maro tany Longyan, Sina ny aotobisy voarohirohy
Desambra 25, 2018
Lehilahy iray no nanao an-keriny bisy ary nitondra azy nankany amin'ny olona marobe tao Longyan, tanànan'ny Sinoa, ary namono olona 8 ary 22 no naratra. Ilay mpanafika dia inoana fa niditra tao anaty bisy nitondra antsy ary niteraka horohoro.
Tany amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Fujian no nitrangan'izany. Voalaza fa notazomin'ny polisy ilay nahavanon-doza. Toa nanafika ny mpandeha tamin'ny antsy izy ary, rehefa nanomboka nandositra ny olona, ​​nipetraka tao ambadiky ny kodia ary nitondra vahoaka. Ny iray amin'ireo maty dia heverina ho polisy.
Lahatsary an-tserasera, izay voalaza fa avy tany an-toerana, dia mampiseho làlana feno fako amin'ireo fiara simba sy vondrona polisy sy olona nijoro nanenjika ilay voalaza fa mpanendaka.
Ny sarimihetsika hafa dia mampiseho ny olona mihohoka amin'ny tany, toa naratra tamin'io tranga io.